RW Rooble oo kulankii ugu danbeeyay ku macsalaameeyay Golaha Wasiirada iyo codsi.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. RW Rooble oo kulankii ugu danbeeyay ku macsalaameeyay Golaha Wasiirada iyo codsi.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
RW Rooble oo kulankii ugu danbeeyay ku macsalaameeyay Golaha Wasiirada iyo codsi..
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee xilka ka degaya Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyey shirkii ugu danbeeyay Golaha wasiirada oo ka dhacay Hotel ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Shirka Golaha Wasiirada ayaa maanta shirkoodii ugu dambeeyay ku qabsaday hoteelka Dorbin ee magaalada Muqidsho. Maxamed Xuseen Rooble ayaa shirka uga hadlay Waxqabadkii u qabsoomay Xukuumaddiisa muddadii ay shaqeyneysay.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa xubnaha Golaha Wasiirrada ugu mahadceliyay sidii wanaagsaneyd ee ay ula soo shaqeeyeen, isagoo kula dardaarmay, kana codsaday inay sii wadaan howlaha qaranka iyo gacan siinta Ra’iisul Wasaaraha magacaaban iyo dowladda cusub.
Berri ayaa lagu wadaa inuu Baarlamaanka Federaalka codka kalsoonida siiyo Ra’iisal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre.
Previous articleHaweenaydii ugu horeysay ee Muslim xijaaban ah oo ka mid noqotay Baarlamaanka Australia
Next articleCabdi Qeybdiid oo kusoo laabtay Guddiga Aqalka Sare ee Dastuurka iyo Puntland oo ka maqan